Shabaab oo weerar ku qaaday bas mararay inta u dhaxeysa Ceelwaaq iyo Kotulo Kenya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Shabaab oo weerar ku qaaday bas mararay inta u dhaxeysa Ceelwaaq iyo...
Shabaab oo weerar ku qaaday bas mararay inta u dhaxeysa Ceelwaaq iyo Kotulo Kenya
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya inay Weerar ay ku qaadeen koox la aaminsan yahay inay shabaab Yihiin Bas Marayay inta u dhaxaysa bas mararay inta u dhaxeysa Ceelwaaq iyo Kotulo,.
Saraakiil katirsan Booliiska Kenya ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in weerarkii labaad oo lagu qaaday Gaari bas ah uu ka dhacay Gudaha Dalkaas gaar ahaan deegaannada dhulka Soomaalida ee Kenya maamusho.
Dhacdadii ugu dambeysay waa weerar lagu qaaday bas mararay inta u dhaxeysa Ceelwaaq iyo Kotulo, kadib markii koox hubeysan oo loo maleynayo in ay katirsan yihiin A-Shabaab weerartay bas ka yimid Magaalada Nairobi.
sidoo kale Inta la xaqiijiyay waxaa dhaawac soo gaaray 8-ruux oo qaarkood laga deerinayo dhaawacooda oo ah mid halis ah sida dhaqaatiirta daweyneyso ay u sheegeen ehelka bukaannada dhaawacyada laga daweynayo.
Previous articleTaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Gen. Mark Milley, oo laga helay coronavirus
Next articleRaisal wasaare Rooble oo ku jira saacadihii ugu danbeeyay ku dhawaaqista golihiisa Wasiirada
Natiijada baaritaanka weerarkii ka dhacay Xabsiga dhexe oo la soo bandhigay
Madaxweyne Qoor Qoor maxoow ka yiri Shirka Dhuusamareeb Tirii